February 2021 – BaHuTuTa
တကယ်ကြီးကိုတူတာဟ… #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန် ကြိုးစားနေပါက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ကယ်လိုရီများ လောင်ကျွမ်းစေခြင်းမှာ အဓိကကျသည်။ သို့သော် လုံလောက်သော ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှု မရှိပါက ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲသည်ကို သင်မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ယင်းသို့ ကြုံတွေ့နေပါက ကယ်လိုရီများ လောင်ကျွမ်းစေရန် ကြိုးစားနေစဉ် မှားတတ်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများစွာသည် နံနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း […]
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ သမီးတော် နှစ်ပါးရှိသတဲ့….။အဲဒီ သမီးတော်လေးတွေ ငို ရင် မျက်ရည်တွေဟာ စိန်ပွင့်တွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့..။ပထမ မင်းသမီးကတော့ မင်းသားလေးတစ်ပါးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ မျက်ရည်ကဖြစ်တဲ့စိန်ပွင့်တွေနဲ့ ရဲတိုက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆောက်ပြီး နေထိုင်ကြပါတယ် ။ မင်းသမီးငယ်လေးကတော့သိုးကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံခါနီးမှာ သမီးတော် ၂ပါးကို […]
ကိုယ်တွေချစ်တဲ့အနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေက ဒီအနုပညာလောကထဲကနေ ထွက်ဖို့ထိဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြဖူးတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့… Shailene Woodley မင်းသမီးချော Shailene Woodley ဟာ အနုပညာလောကထဲကထွက်ဖို့ထိစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကို ပရိသတ်တွေက အများကြီးယုံကြည်ထားကြလို့ပါတဲ့။The Descendants ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Shailene Woodley သူမရဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေအများကြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကိုရပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းက ကျွန်မကိုပြောကြတယ်။နောက်ထပ် ကျွန်မဘာတွေလုပ်ပြနိုင်ဦးမလဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ဒါက ကျွန်မကို […]
ရုံးဝန်ထမ်း ပျိုမေတွေအတွက် မျက်နှာပြင်ဆင်ခြယ်သမှုအပိုင်းဟာ အလွန်ပဲ အရေးပါလှပါတယ်။ ထသွားထ လာလို ဖြစ်သလို ပြင်ဆင်သွားဖို့ရာလည်း မသင့်တော်၊ ပါတီတွေ၊ ဒင်နာတွေသွားသလိုအလွန်အကျွံခြယ် သမယ်ဆိုရင်လည်း ကုမ္ပဏီ၊ ရုံးတက်တာနဲ့ မတူတော့တာမို့ ရုံးတက် ရုံးဆင်း မိတ်ကပ်ခြယ်သမှု၊ ဆံပင်ပြင် ဆင်ထုံးဖွဲ့မှုအကြောင်း ပြောပြပေးပါ့မယ်။ မိတ်ကပ် သဘာဝဆန်ဆန်လေး ပြင်ဆင်သွားလိုက်ပါ။ […]
1. ပျော်တတ်အောင်သင်ပေးပါ ဒီအရွယ်ဟာ ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်ကောင်းပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာမှ လောကကြီးရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝမခံစားရင် သိပ်နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအရွယ်မှာ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမပိတ်ပင်ပဲ အတိုင်းတာတစ်ခုထိလွှတ်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ 2. အကောင်းမြင်တတ်အောင်သင်ပေးပါ အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထဲကနေတြစ်ဖည်းဖြည်းသင်ပေးပါ။ တစ်ဘဝလုံးအတွက် စိတ်ချမ်းသာဖို့အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ 3. တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်အောင်သင်ပေးပါ ဒီအရွယ်မှာ အရှိသင့်ဆုံးကတော့တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့ စိတ်ထားလေးပါပဲ…ဆိုလိုချင်တာက တစ်ချို့သော ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ ဒီလိုမနူးမနပ်အရွယ်မှာ […]
ဒီတစ်ခါတော့ Deodorant လေးတွေရဲ့တမူထူးခြားအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအကြောင်းပြန်ပြီးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Deodorant ဆိုတာချွေးနံ့ပျောက်ဆေးအဖြစ် ချိုင်း၊ခြေဖဝါး၊ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ချို့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းမှန်း အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့Deodorant ကို နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါသေးတယ်။ဘယ်လိုနေရာတွေမှာလဲ? မျက်နှာမှာသုံးလို့ရတယ် Natural Deodorant ကို မျက်နှာမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ဘာအတွက်သုံးရမလဲဆိုရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ ပြောင်ပြောင်တောက်တောက်လေးဖြစ်နေစေဖို့ပါ။ပါး၊နှာခေါင်း၊နဖူးနေရာတစ်ဝိုက် deodorant လေး နည်းနည်းပွတ်လိမ်းလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါမှာ ပိုတောက်ပပြီးကြည့်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။Mineral salts ဒါမှမဟုတ် crystal ပါဝင်တဲ့ […]
ကက်သွန်နီခွါပြီးတိုင်း အခွံတွေကို လွှင့်ပစ်တတ်ကြတယ်မလား ။ ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြိးရင်တေ့ာ လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ကြက်သွန်နီ အခွံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စားလို့တော့မရပါဘူးနော် .. ၁။ရောင်ရမ်းနာကြင်မှုတွေ သက်သာစေ ကြက်သွန်နီအခွံမှာ ရောင်ရမ်းနာကြင်မှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သဘာဝအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် ။ ခွာထားပြီးသော ကြက်သွန်နီအခွံတွေကို […]
နယူဂျာစီသူ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ ၁၁၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ညွှန်ကြားတဲ့အတွက် Miller High Life ဘီယာ နဲ့ စကော့ဝီစကီ တစ်ပက်ကို နေ့တိုင်း သောက်သုံးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ကျော်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ Englewood မှ Anges Fenton ဟာ စနေနေ့က […]